Accueil > Gazetin'ny nosy > Inty sy Nday: Iza no tena mikendry korontana eto ?
Inty sy Nday: Iza no tena mikendry korontana eto ?
Na dia tsy hitohy raha tsy any amin’ny faha-3 aprily, amin’ny herin’ny anio talata aza, ny fivorian’ny solombavambahoaka handinihana indray ny rijan-teny mirakitra ny tolo-dalàm-pifidianana avy amin’ny fanjakana dia mbola ivon’ny ady hevitra sy fanehoam-pijery etsy sy eroa ihany io raharaha iray io.
Samy mampiaka-peo na ny fitondrana Hvm sy ny mpiara-dia aminy na ny manohitra azy fa “hiteraka korontana io lalàm-pifidianana io”. Ny Hvm tamin’ny alalan’ny filoha nasionaliny, Rivo Rakotovao, dia nandrahona ankolaka fa “raha tsy mahazo fankatoavana io lalàm-pifidianana avy amin’ny governemanta io dia mety hiteraka korontana”. Dia mody nomarihiny fa “na ny filohampirenena aza ange ka efa manaiky hametra-pialana araka ny voalazan’ny Lalàmpanorenana rehefa tonga ny fotoana momba izany e !” Toa te hilaza izy fa “efa dodona ny handray ny andraikitra amin’ny maha-filohampanjakana mpisolo toerana aho amin’ny maha-filohan’ny Antenimietandoholona ahy”.
Ny manohitra io tolo-dalàm-pifidianana natolotra ny governemanta io kosa ka mihevitra fa hahatsara zavatra ny fankatoavana an’ireo fanitsiana nentin’ny sokajin’olona maro (vondrona parlemantera sy firaisamonim-pirenena…) dia efa nanambara mivantana fa “manasa tanana izahay raha sanatria ka io rijan-teny natolotra ny governemanta amin’ny endriny ankehitriny io, tsy asiam-panitsiana no hahazo fankatoavana avy amin’ireo solombava namana, izay mety hoentanin’ny vola hanampina ny masom-panahiny, ary tsy tompon’antoka izahay raha mitranga ny korontana vokatr’izany”.
Eo izany nosarihana ny sain’ny maro hoe “raha zavatra hiteraka korontana toa izany ve ry zalahy, tsy tsara ny hisorohana ny olana tsy hitranga fa sanatrria mbola hatao amboletra sy andetrezana ve ny fankatoavana azy io ?”
Maro aloha izao no mitovy fomba fijery fa na maika aza ny hirosoana amin’ny fifidianana, raha sanatria ka hiteraka korontana kosa, tena mahafaty ve ny miara-mitady lalana hafa aloha. Tsy misy ho afa-bela na ho tafavoaka velona eto ange raha sanatriavin’ny vava ka izany tokoa no miseho e !
Raha ry Rivo Rakotovao aloha dia efa mazava ny azy ny paika fa na hisy korontana na tsy hisy dia tsy maintsy “filohampanjakana” ny tenany amin’ny volana novambra. Fa ho vitan’izany angaha ny raharaha? Ny ahian’ny maro aza dia i Rivo Rakotovao no hitsoaka handositra voalohany miala eto Madagasikara raha sanatriavin’ny vava ka mitranga ny korontana eto, na ny tolo-dalàna tsy nasiam-panitsiana avy amin’ny governemanta no hahazo fankatoavana eo na ny rijan-teny nohatsaraina tamin’ny alalan’ireo fanitsiana miisa 87 na mety hihoatra an’izany.
Ho sanatriavina anie izany rehetra izany.